LANDA i-Phot Eveal Mt Everest plus Mesh FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 543 MB
Play 36 921
Umbhali: Frank Dainese, Daniele Tona + anezikhala Lesibanti by Ferranti & Sandmann
Superb nobuhle bendawo photoreal eveza ngokwethembeka sendawo of Mount Everest (lesinqumo high) kanye seroundings yayo.
An uhambo umxhwele inhliziyo zezintaba! Nasi dlala iDemo ividiyo preview:
Nansi indawo zicatshangelwe yokwenza photoreal of Mount Everest:
Imininingwane engaphezulu ingatholwa "kwimenyu yakho yokuqalisa -> i-add-on Rikoooo -> Mt Everest izithombe ezengeziwe FSX & P3D Mesh -> imibhalo nezithombe "
Isexwayiso ifayela enkulu 524 MB, Kutuswa ukusebenzisa isofthiwe thwebula namafutha ukuba ume bese kabusha iphuzu yokuboshwa bengenaso lezimanga (isib FlashGet).
Okubalulekile, ukuthi ukusebenzisa indawo? Qala indiza, bese phakathi umdlalo ukuvula imephu bese ufaka omunye Amadivayisi GPS ngezansi ukuze uhambise ngqo izindiza yakho ukuze amaphuzu ezithakazelisayo kunazo:
Mt.Everest yokwenza photoreal ·· N27 ° 28 ° E86 ° 87 °
Mt.Everest futhi Kula Kangri ········· N26 ° 28 ° E85 ° 92 °
Lula, ungaqala ukubaleka kwenu kusukela Lukla.
Lukla kuyinto edolobheni Khumbu esifundeni yaseNepal. It is a evamile owela iphuzu ezivakashela zaseHimalaya, kuhlanganise Everest, ekuqaleni nasekupheleni kohambo lwabo. Lukla imayelana 2860 metres ngaphezu kolwandle.
It has an airfield (sezindiza Tenzing-Hillary) anabamemezeli ithrekhi mayelana 500 amamitha 12 ° emthambekeni (ayingozi kakhulu emhlabeni). Lona, wamboza 2001, kunzima ikakhulukazi ukufinyelela ngaphandle kokufika usizo. I traffic ikakhulukazi ezikhiqizwe izinkampani zasekhaya ukuhlinzeka shuttles esikhumulweni sezindiza Kathmandu: flight imizuzu 40 by Twin Otter futhi Dornier Do 228.
qala ukubaleka kwenu kusukela "Lukla"kumele icaciswe lapho kukhethwa indawo yokuqala FSX/P3D
Jikela ngakwesokudla njengoba kubonisiwe ebalazweni elingezansi bese uqhubeke iqonde ku Mt Everest
Yiba indiza omuhle
I-Grand Teton National Park - Iphakethe eligcwele FSX & P3D
I-OFX Africa ithuthukise i-V1.0 FSX & P3D